Iska Illow Lionel Messi – De Bruyne Oo U Sheegay Guardiola
Tababaraha Manchester City, Pep Guardiola ayaa la sheegay inuu bartilmaameesanayo ciyaartoy horyaalka Premier League ka dheela oo waxqabadkiisu sarreeyo, isla markaana warbaahinta Ingiriisku si aad ah wax uga qoraysay muddooyinkii dambe.
Manchester City ayaa lala xidhiidhinayaa Lionel Messi oo heshiiskiisa Barcelona uu ku eg yahay dhamaadka xili ciyaareedka, kaas oo bisha January ay heshiis mabda’ ah si xor ah ula sii geli karayaan.
Laakiin dhismaha mustaqbalka ee ay tahay in loo diyaar-gaboobo, waxa Pep Guardiola uu go’aankiisa gaadhay kaddib markii uu Kevin De Bruyne miiska u soo saaray soo-jeedinta laacib haddii ay helaan ay wax badan iska beddeli doonto awoodda kooxdu.
Sida uu qoray wargeyska The Independent, Kevin De Bruyne ayaa u sheegay Pep Guardiola in kooxdu ay lasoo saxeexato kubbad-sameeyaha, ahna kabtanka Aston Villa ee Jack Grealish oo wacdaro ka dhigaya horyaalka xili ciyaareedkan.
De Bruyne oo ay Grealish iskaga hor yimaaddeen kulamadii caalamiga ahaa iyagoo la kala safan xulalka Belgium iyo England, taas oo uu si dhab ah ugu garwaaqsaday heerka ay gaadhsiisan tahay tayadiisu.
Warku wuxuu intaa ku daray in laacibkan oo City ay ku heli karayso lacag illaa £100 milyan oo Gini ah, inuu si fiican u buuxin karayo boosaska khadka dhexe gaar ahaan booskii David Silva iyadoo uu ku darsanayo hal-abuur iyo gool dhalin intaba.
25 jirkan oo hore ay Manchester United u doonaysay, balse ay saxeexiisa ku fashilantay xagaagii dhowaa ayaa waxa uu horyaalka Premier League ee xili ciyaareedkan ka dhigay wacdaro iyadoo uu Aston Villa ka caawiyey inay ku riyooto inay kasoo muuqato tartamada Yurub xili ciyaareedka dambe.
Guillaume Soros’s French lawyer questions the validity of arrest warrants